३ डिआईजी बढुवाको तयारीसंगै शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप: को-को छन् चर्चामा ? - Kantipath
३ डिआईजी बढुवाको तयारीसंगै शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप: को-को छन् चर्चामा ?
नेपाल प्रहरीका तीन डिआईजी एआइजीमा बढुवा भएसंगै रिक्त रहेको पदमा बढुवा हुनको लागि एसएसपीहरुको दौडधुप सुरु भएको छ। बढुवा क्रममा रहेका एसएसपीहरूले डीआईजी बन्नका लागि दौडधुप सुरु गरेका हुन्।
डीआईजी प्रतिस्पर्धामा एसएसपीहरू उमेशराज जोशी, दीपक थापा, वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, सन्दीप भण्डारी, अशोक सिंह, भीम ढकाल, रामदत्त जोशी, श्याम ज्ञवाली, दुर्गा सिंह छन्। यस्तै, एसएसपी विष्णु केसी, कुबेर कडायत, सुदीप गिरी, राजेश बास्तोला, जनक भट्टराई, केदार ढकाल, यज्ञविनोद पोखरेल पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग आफूलाई डीआईजीका लागि सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
अहिले पहिलो चरणमै डीआईजी बन्न सके भावी आईजीपीको दौडमा कायम रहन सकिने भएकाले पनि शक्तिकेन्द्र रिझाउन सबैजसो एसएसपीहरू सक्रिय छन्। तीन डीआईजीका लागि तीन ब्याचका ३३ एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन्। आउँदो वैशाख १९ गतेपछि भने अरूले पनि डीआईजी बन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले वैशाख १९ मा अवकाश पाउनेछन्। उनीसँगै उनका ब्याची एआईजी र डीआईजी पनि अवकाशमा जानेछन्।
मेरिट लिस्ट अनुसार पुरानालाई बढुवा गर्ने वा नयाँलाई अवसर दिने भन्नेमा मतभेद देखिएको छ । आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै २०४९ वैशाख १९ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजेन्द्र प्रसाद चौधरी र प्रदीप कुमार श्रेष्ठ पनि डीआईजी हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । नयाँ ब्याचबाट २०५१ चैत ५ मा सेवा प्रवेश गर्नेहरु र २०५२ भदौमा भर्ना भएका अधिकृतहरु पनि बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् । २०७५ फागुन ६ मा एसएसपीमा बढुवा भएकाहरु मध्ये डीआईजी बढुवामा अगाडी आउने अधिकृत मध्येबाट भावी आईजीपी बन्नेछन्
चौधरी मेरिट लिस्टको ३ नम्बरमा छन् । मेरिट लिस्टको पहिलो नम्बरमा नल प्रसाद उपाध्याय र दोस्रो नम्बरमा मोहन कुमार आचार्य छन् । उपाध्याय र आचार्य २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका थिए । प्रदिप कुमार श्रेष्ठ मेरिट लिस्टको पाँचौ नम्बरमा छन् । मेरिट लिस्टको चौथो नम्बरमा छन्, मसउद आलम खाँ ।